Madaxweyne Xasan: Muddo kororsi ma sameyneyno, doorashana waa la qabanaa 2016 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxmuud ayaa sheegay in dalka ay doorashadii la qorsheeyey ka dhici doonto sanadka 2016.
Madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa sheegay in doorashada loo qaban doono qaabka markaas suuragal ah, balse aan dib loo dhigi doonin.
“Waan ku celcelinay, mar kale waan ku celineynaa wax kororsiimo ah ma jiraan, 2016 waqtiga dowladaani markii uu dhamaado dowladii badali lahayd ayaa imaaneysa kororsiimadu is qabqabsi ayay leedahay is tuhuney leedahay mana dooneyno taas” ayuu yiri madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa sheegay in haddii ay suurgal noqon weydo in meel kasta sanduuq doorasho la geeyo, doorashadu ka dhicin doonto magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka.
“Doorashadu waa dhacee, haddii meel kasta la geyn waayo sanaadiiqda cod bixinta waxaa la geynayaa magaalo madaxdayada gobollada iyo degmooyinka iyo meel kasta oo inoo sahlan” ayuu sidoo kale yiri mnadaxweyne Xasan.
“Haddii ay dhacdo in meel kasta la geyn waayo sanaadiiqda ma meel ayaan iska fariisaneynaa, markaasaan leenahay dalka oo dhan lama wada tegi karo?, taasi waa maya” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Hadalka madaxweyne Xasan ayaa yimid kadib markii uu shalay Muqdisho kulan kula yeeshay Xoghayaha Arrimaha Debadda Mareykanka, John Kerry.
Bilihii dhawaa ayaa waxaa jiray warar la isla dhex marayey oo sheegay in dowladda haatan jirta dooneyso iney waqtiga kororsato, maadaama waxyaabo badan ka dhiman yihiin qaabkii doorasho dadku ka qeybqaato loo qaban lahaa.